Sekuqubuke imibuzo ‘ngokubeletha’ komculi wodumo amawele | News24
Sekuqubuke imibuzo ‘ngokubeletha’ komculi wodumo amawele
Cape Town – Sekuqubuke imibuzo mayelana nokuthi umculi waseMelika ongaconsi phansi futhi ophinde abe ngumlingisi, uBeyoncé, usewabelethile yini amawele osekunesikhathi elindelwe.
Imibuzo eminingi kanye nokuqagula sekusabalale ezinkundleni zokuxhumana kulandela ukuthi kubonakale izimbavumbavu zezimoto ezimnyama zohlobo lwama-SUV zishaya ujenga ziphuma endlini kaBeyoncé kanye nomyeni wakhe, ongumrepha kanye nosomabhizinisi, u-Jay Z, ngoLwesibili.
Kuqubuke okukhulu ukuqagula ngesikhati iThe Shade Room ithi uBeyoncé uyiswe esibhedlela iRonald Reagan UCLA Medical Centre futhi usekulungele ukubeletha amawele akhe.
Kodwa-ke lezi zithandani zidume ngokugcina izinto zazo ziyimfihlo kanti abukeka emancane amathuba okuthi ziqinisekiswe lezi zindaba kuze kube uJay Z kanye noBeyoncé benza isimemezelo ngokwabo. Kodwa-ke lokhu kubukeka kungabavimbanga abantu, ikakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana ukuthi baqhubeke nokuqagula.
Njengoba kulokhu kukhula ukuqagula, kuphinde kube nemibiko yokuthi lo mculi wodumo lwengoma esihloko sithi Sorry useqinise ezokuphepha zakhe kanti futhi useze wacela nokuthi kukhiywe isitezi sonke sasesibhedlela.
Kuphinde kwanda nokuqagula kokuthi ‘owele’ sebesendleleni ngemuva kwesithombe esifakwe ku-Instagram ngumcwali wezinwele zosaziwayo, uChuck Amos. U-Amos ufake isithombe sakhe enoBeyoncé nalapho ebe esebhala ukuthi: “Sekuzolunga, Mama!”
Okuphinde kwangeza kulokhu kuqagula umbiko we-E! News wokuthi udadewabo kaBeyoncé, uSolange Knowles, uzobe enesikhathi sonke sokuzizwisa ngalo mzuzu oyingqayizivele wokubelethwa kwamawele nodadewabo njengoba ingekho imicimbi abhukhwe kuyona kuze kube umhlaka-23 Juni.
Zibonele eminye yemibhalo ezinkundleni zokuxhumana yalokhu kuqagula ngezansi:
All of the doctors fighting over who would deliver Beyoncé's twins ?? pic.twitter.com/OCX9Td5MlJ
Rumour is @Beyonce is in labour with the twins & it got me like... #soexcited #beyonce pic.twitter.com/xqzkkesWpR
— B (@lovedabsolutely) June 15, 2017
Beyonce is in labor pic.twitter.com/nVMQ2hZpW1
— Patrick Karlsson (@Patrickesque) June 15, 2017
THE TWINS HAVE ARRIVED @Beyonce pic.twitter.com/81Xfy0maAx
— ho of color (@irisdescents) June 15, 2017